छो’रा हुन्छ कि छो’री पहिलै कसरी थाहा पाउने ? यस्तो भन्छ बि’ज्ञानले
नेपाल अनलाइन पत्रिका। काठमाडौं। ग’र्भमा रहेको ब’च्चा छो’रा वा हो छोरी ? ग’र्भवतीको शा’रीरिक स्थिति वा अन्य कुनै सं’केतबाट त्यसको छि’नोफानो गर्न सकिएला ? जब तपाईं ग’र्भवती हुनुहुन्छ, परिवार र वरिपरिका धेरै व्यक्तिहरूले तपाईंलाई सल्लाह दिन्छन् वा कथाहरू सुनाउन थाल्छन् । केही व्यक्तिले त तपाईंको पे’टमा रहेको ब’च्चा छोरा छ कि छोरी छ भनेर समेत अनुमान लगाउन भ्याउँछन् । जहाँसम्म यसरी अवै’ज्ञानिक तरिकाले बच्चाको लिं’गको आकलन गर्ने रोचक तरिका छ त्यसलाई धेरैले विश्वास गर्न पनि सक्छन् । ***यो समाचारको भि-डियो हेर्न तल क्लिक गर्नु 👇👇👇***
तर केही रोचक र सामान्य किं’वदन्तीहरू छन् जसले पे’टमा रहेको बच्चा केटा हो या केटी हो ? भन्ने संकेत गर्ने गरिन्छ । तर त्यसमा सत्यता भने नरहेको जानकारहरू बताउँछन् । मु’टुको ध’ड्कन सुन्नुहोस् भनिन्छ, यदि एक भ्रु’णको मु’टुको ध’ड्कन प्रत्येक मिनेट १४०–१६० भन्दा धेरै पटक ध’ड्कियो भने पे’टमा छोरी छ भन्ने आकलन गर्दा हुन्छ । यद्यपि वि’ज्ञानले भ्रु’णको लि’ङ्ग मु’टुको ध’ड्कनसँग सम्बन्धित छ भन्ने कुरालाई स्वीकार भने गरेको छैन । सामान्यतया भ्रु’णको मु’टुको धड्कन १२०– १६० बी’पीएमको बीचमा हुन्छ, जुन जन्मभन्दा पहिले घ’ट्न सक्छ । ***यो समाचारको भि-डियो हेर्न तल क्लिक गर्नु 👇👇👇***
बिहानमा देखिने बि’रामीको ल’क्षण केही व्यक्तिहरू गर्भ’वतीलाई बिहान देखापर्ने बि’रामीको ल’क्षणलाई छोरी जन्मिने संकेतको रुपमा मान्छन् । जबकि विज्ञानले यो ग’र्भावस्थाको समयमा ह’र्मोनल परिवर्तनका कारणले हुने ल’क्षण मान्छ । उच्च ग’र्भावस्था जानकारहरुका अनुसार यदि केटीहरूको पे’ट माथितिर उ’ठेको खालको देखिन्छ भने त्यो छोरी जन्मने ल’क्षण हो भने तलतिर झु’लेको जस्तो देखिनु छोरा पाउने संकेत हो । पे’ट गोलाकार आ’कृतिमा हुनु पनि छोरी भएको संकेत हो । यद्यपि यो धारणा पूर्ण रूपमा गलत छ । ***यो समाचारको भि-डियो हेर्न तल क्लिक गर्नु 👇👇👇***
ग’र्भावस्थामा रहेको बच्चा पे’टको आकारमा नभई फ्या’ट, मां’सपेशीहरूको आकार र भ्रु’णको स्थितिले निर्भर गर्छ । छा’लाको परिवर्तन केही मानिसहरू छा’ला धेरै चिल्लो भयो भने त्यो छोरी जन्मिने संकेत हो भन्ने गर्छन् । यद्यपि विज्ञान अनुसार यो हर्मो’नल परिवर्तनका कारणले हुने बदलाव हो । मुड परिवर्तन ग’र्भावस्थामा ह’र्मोनमा हुने परिवर्तनका कारण महिलाहरूको मु’ड परिवर्तन हुँदै जान्छ । तर केही व्यक्तिहरू यसलाई छोरी जन्मिने संकेतको रूपमा पनि लिने गर्छन् । ***यो समाचारको भि-डियो हेर्न तल क्लिक गर्नु 👇👇👇***
यसमा पनि वै’ज्ञानिक तथ्य भने छैन । स्त’नको आकारमा परिवर्तन यो विश्वास गरिन्छ कि ग’र्भवतीको बायाँ स्त’न दायाँभन्दा अलिक ठूलो देखियो भने यो छोरी जन्मने सं’केत हो र अन्यथा छोरा जन्मिने सं’केत हो । विज्ञानले दु’ग्ध उत्पादन र हा’र्मोनल परिवर्तनहरूका कारण गर्भा’वस्थामा स्त’नको आकार बढ्ने उल्लेख गरेको छ । महिला एकापट्टि फर्किएर सुत्नु यो पनि विश्वास गरिन्छ कि यदि तपाईं आफ्नो गर्भा’वस्थामा दायाँपट्टि सु’तेको महिलालाई देख्नुभयो भने सम्भवतः त्यो बच्चा छोरी हो भन्ने मानिन्छ । यद्यपि यो पनि सत्य होइन किनकि ग’र्भवती महिलाले पे’टको बढेको कारण आफ्नो सु’ताइको स्थिति परिवर्तन गर्नु स्वा’भाविक हो । ***यो समाचारको भि-डियो हेर्न तल क्लिक गर्नु 👇👇👇***
यस्तो अवस्थामा सुत्न महिलाहरूले सहज महसुस गर्छन् ।पि’साबको रंगमा परिवर्तन हुनु यदि तपाईं ग’र्भावस्थामा पहेँलो रंगको पि’साब फेर्नुहुन्छ भने तपाईंको छोरी हुने सम्भावना हुन्छ । वास्तवमा पि’साबको रंग बच्चाको लिं’गसँग सम्बन्धित भने हुँदैन । तर पि’साबको हल्का रंग डिहा’इड्रेसनको संकेत भने हो । गु’लियो खानेकुराको लालसा एक आमधारणा यो छ कि जब ग’र्भवती महिलाले चकलेट र आइसक्रिम जस्ता गुलियो खानेकुरा धेरै खान्छन् भने उनीहरुको पे’टमा छोरी छ भन्ने आकलन गरिन्छ । ग’र्भावस्थामा यस्तो हा’र्मोनल परिवर्तन पोष’णको कमीका कारण हुन सक्छ । ***यो समाचारको भि-डियो हेर्न तल क्लिक गर्नु 👇👇👇***
यसबाहेक, ग’र्भमा केटा वा केटीमध्ये के छ भनेर केही हा’स्यास्पद तरिकाले पनि भविष्यवाणी गर्ने गर्छन् । एउटा धागोमा औंठी बाँधेर ग’र्भवतीको पेटमाथि राख्नुहोस् । यदि औंठी पे’टमा गोलाकार गतिमा घुम्यो भने यो संकेत छोरी जन्मिन्छ भन्ने मान्यता छ । अन्यथा छोरा जन्मिन्छ भन्ने मान्यता छ ।यो पनि विश्वास गरिन्छ कि यदि म’हिलाको उ’मेर र ग’र्भधारणको मिति समान छ भने छोरी पाउने सम्भावना हुन्छ । यस्ता तर्कहरू भने केवल ठ’ट्टाका लागि गरिने तर्कहरू हुन् । ***यो समाचारको भि-डियो हेर्न तल क्लिक गर्नु 👇👇👇***